Afaka manome ahy mpitarika mpikirakira fomba hanamboarana rindranasa ho an'ny SEO aho?
Raha jerena io fanontaniana mahaliana io - ahoana no fomba hananganana backlinks ho an'ny SEO - tsy misy torolàlana manerantany ho an'ny mpanombona. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mitoetra maharitra sy manam-paharetana. Raha ny tena marina, ny tsy fahampian'ireo toetra roa ireo dia mety ho lozam-pifamoivozana faran'izay mahazaka matetika amin'ireo webmasters vaovao sy tompona orinasa an-tserasera. Andeha hojerentsika - ny dingana sasantsasany sy ny fizotran'ny Search Engine Optimization. Mazava ho azy, indraindray ianao dia afaka mankafy fandrosoana tsara amin'ny toerana fikarohana ao amin'ny tranonkala ao amin'ny SERPs Google - saika tsy misy fotoana - raha toa ianao ka laharana amin'ny indostria tsy mifaninana. Noho izany, misy ohatra tsy dia fahita firy loatra ka lasa fitsipika na fironana ankapobeny. Na izany aza, ho an'ny ankamaroan'ny tranga misy isan'andro momba ny fomba hananganana backlinks ho an'ny SEO, dia nampiasa ireto fomba manaraka ireto aho: manao fikarohana momba ny tranonkala, mahazo ny zava-drehetra efa voalamina tsara, mahita ny zava-mitranga marina amin'ny sariohatra tsara, manoratra votoaty manome lanja ary ny fihazonana ny fifandraisana. Koa, etsy ambany aho dia hamerina fohifohy ny drafitra tsirairay.
Ahoana no fomba hananganana Backlinks ho an'ny SEO
Fikarohana fikarohana tsara
Alohan'ny zavatra hafa, dia mila anao hikaroka fikarohana mifanentana tsara. Midika izany fa mampiasa fitaovana an-tserasera toy ny Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), na SEO Toolkit avy amin'i Ahrefs ianao dia tokony handany fotoana kely hahazoana sary feno amin'ny dingana ho avy amin'ny tetikady fanorenana mifandraika amin'ny rohy. Tsy mahafantatra ny fomba fananganana backlinks ho an'ny SEO? Na mahatsapa ny tsy fahampian'ny fahamendrehana hanombohana tsara? Tsy ilaina ny manahy - mitadiava fikarohana feno ho an'ireo tranonkala mpifaninana sasany ao amin'ny fonosanao ary manomboka mahatakatra ny voanjo sy ny bolongana hatrany am-piandohana, ary mahazo fanohanana amin'ny fomba mahomby azo tsapain-tanana.
Nahazo ny zava-drehetra voaomana tsara
Raha vao vita ny fikarohana fifaninanana, dia tokony ho vonona ny hamolavola lisitr'ireo referrals sy olona tena voakasika amin'ny boky mahomby indrindra ny backlinks matanjaka mahery indrindra (midika ho an'ireo izay manana ny Pagerank sy Domain Authority ambony indrindra). Ataovy tsotra fotsiny ny takelaka na drafitra fanoratana ny lahatsoratra hanoratanao sy hamonjena ireo angon-drakitra manaraka: ny anaran'ny mpanao gazety, ny mailaka, ny fahefana momba ny sehatra. Aorian'izay isika dia mila mahita ny adihevitra marina - raha ny marina, ny zavatra tena sarotra atrehina rehefa mianatra ny fomba hananganana backlinks ho an'ny SEO.
Fitadiavana ny zava-misy marina
Atombohy amin'ny fikarohana ny fisorohana mety amin'ny tongotry ny tranokala (i. f. , "Fifandraisana" na "mikasika" fizarana pejy). Raha tsy mahita ny adiresy imailaka imailaka mivantana ao amin'ny tranonkala ianao, dia tsy misy na inona na inona hijanona afa-tsy ny mijery any amin'ny media sosialy toy ny Twitter, Facebook, LinkedIn, na ireo sehatra hafa mifandraika amin'izany.Eny, asa tena mahavotra sy maharitra izany, saingy ny asa dia tsy sarotra tahaka ny mety ho fiheverana fohy.
Aza misalasala maka fotoana kely amin'ny fikarohana momba ny mpanoratra na ny mpitarika ny indostria. Aza avela mampiasa rindrambaiko maody mba hamoronana pentina tsy tambo isaina tsy misy tononkalo mahazatra. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny manamboatra ny tenanao manokana - tena mpilalao sarimihetsika tena izy mba hisorohana ireo tsy fahampiana sy tsy fahombiazan'ny fisainana mivezivezy.
Fandraisana Content izay manome ny hasarobidiny sy ny fihazonana fifandraisana
Raha vao naheno ianao fa te hanana ny votoatinao dia efa fandresena lehibe. Ataovy ao an-tsaina anefa fa ezaka mahasoa. Aza adino velively fa rehefa manoratra ny votoatiny tsara sy voajanahary ianao. Raha vao vita ny famoahana ny sombin-taratasinao voalohan-dry zareo, ataovy azo antoka ny fifamatorana misy eo aminao - afaka mampiditra lahatsoratra bebe kokoa amin'ny tranokala iray ihany ianao! Efa nanomboka ny dia, satria mbola tokony hiasa hatrany ny fifandraisana vaovao indray ianao, hizara ny fahaizanao matihanina, ary hitombo kokoa ny fisondrotana, mba hahazoana fitohanana fifamoivoizana goavana Source .